Ny fipoahana ny Galaxy Note dia miverina eny an-tsena. Izao dia miankina amin'ny Note 9 | Androidsis
Roa taona lasa izay, manodidina io fotoana io, noterena ny orinasa Aziatika tadidio ny Galaxy Note 7, terminal misy fika sy endrika mahafinaritra nefa nisy olana kely kely: nipoaka izy ireo. Saingy ny orinasa aziatika dia tsy nijanona tsy nivarotra an'ity maodely ity ihany, fa nisintona ny singa rehetra izay efa namidy hatreto.
Volana vitsivitsy taty aoriana, nametraka tatitra ny orinasa milaza izany ny olana dia noho ny famolavolana ny bateria, famolavolana namela ireo takelaka manasaraka ireo ranon-javatra ao anatiny, vaky mora foana ka miteraka fipoahana. Hatramin'izao dia nanome lanja betsaka an'ity sehatra ity ny orinasa, saingy toa miverina ihany ny tantara.
Galaxy Note 7 sy ny fahasimbana ateraky ny afo tao an-tranon'i Wesley Hartzog | Sary: Wesley Hartzog
New York no hany tanàna nanolotra ny tranga voalohany sy tokana fipoahana ny Galaxy Note 9, hetsika iray izay mety hiteraka fantsom-baovao mitovy amin'izany erak'izao tontolo izao, ary raha tsy izany, amin'ny fotoana mitovy. Diange Chung, mpandraharaha amin'ny trano sy tany, dia nahatsikaritra ny fomba Galaxy Note 9 vaovao nanomboka mafana be. Mba hanandramana sy hampangatsiahana azy dia najanony ny fampiasana azy ary napetrany tao anaty kitapony fandehanana raha tany ambany rihana tao amin'ny trano iray any Bayside.
Tamin'izay no nanomboka nifoka ny kitapony. Tamin'io fotoana io dia nilatsaka tamin'ny ascenseur ny kitapony ary nanomboka nanindry ny bokotra fanairana izy, ary feno setroka kosa ilay trano kely iray manontolo. Araka ny vakiantsika ao amin'ny The New Post, tonga teo amin'ny lobby nandroaka ny terminal ilay vehivavy, mandra-pahatongan'ny olona nanipy rano siny iray taminy.
Samsung dia nilaza fa manadihady ny raharaha izy, ary raha vao fantany ny anton'ny fipoahana dia hataony ampahibemaso. Ny orinasa tsy tianao hitranga indray ireo olana nanjo anao tamin'ny Note 7, olana vitsivitsy izay tsy nisy fiatraikany tamin'ny laharan'ilay orinasa tamin'ny farany, fa raha averina izy ireo, dia hametraka ilay orinasa amin'ny toe-javatra ratsy eo imason'ny mpampiasa azy, fa tsy ny an'ny tandavan-naoty fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny fipoahana ny Galaxy Note dia miverina eny an-tsena. Izao dia miankina amin'ny Note 9